Åre Travel Mitt e Åre 2 -panorama Åre Torg ski inn
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguÅre Travel
Ifulethi elahlukileyo kakhulu-indawo igqwesileyo e-Åre. Ski in/out, jonga phezu kwe-Åre Square.
Indawo entle, enkulu kwaye ixhotyiswe ngokupheleleyo kufutshane nayo yonke into oyifunayo. Unokuphumla kwi-sauna emva kosuku olupheleleyo lwemisebenzi. Kakhulu ukuba uthanda ukutyibiliza, ukuhambahamba, ukukhwela ibhayisekile, ukuya kuloba, iparagliding njalo njalo. Ngokufuthi kuyenzeka ukubona izibane zaseMntla kwilali yethu ngokunjalo.
NgoJanuwari 2021 akukho sauna kwigumbi.
Eyona ndawo ibekwe e-Åre, ngokuqinisekileyo.
Unique ski- to door 657-sq-foot (61-sq-meter) flat ejongene zombini Åre square kunye ne ski slope, phezu Skistar shop Hansson kunye restaurant Max kunye 50 yeemitha ukuya ski lift Åre Bergbanan.
Le ihonjiswe yodwa, igumbi lokulala eli-3 + igumbi lokuhlala + ikhitshi linebalcony yaseFransi, iTV enescreen esisicaba, isofa enkulu, itafile yokutyela enegumbi labantu abali-9, kwaye yahlaziywa ngoJanuwari 2017.
Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye nelanamhlanje line microwave, idishwasher, ioveni, isitovu, ioveni, ifriji egcweleyo/ifriji, ikofu/umenzi weti, icookware, idishware, kunye nempahla, idishwasher kunye neketile yombane.
Nceda uqaphele: njengoko ixabiso elifanayo le-1 okanye i-9 abantu, asikwazi ukubonelela ngelinen yelinen yamahhala kunye neethawula - Kunokwenzeka ukurenta kuthi, ukusuka kwi-SEK 115 ngomntu ngamnye.
1 Ibhedi ephindwe kabini (160 cm) - ilala 2
Ibhedi eyi-1 yeQueensize (140 cm) - ilala 2
Ibhedi enkulu e-1 enkulu- (110 cm) ilala 1 (2)
Ibhedi e-1 ekumgangatho omnye- (90 cm) ilala i-1
Ibhedi ephezulu e-1- (90 cm) ilala i-1
Ibhedi enye e-1 (80 cm) - ilala i-1
Ski in, indawo ephezulu
Igumbi lokuhlambela eline-sauna yabantu aba-4, isomisi seenwele kunye neshawari
Ukugcinwa kwemithwalo, amagumbi okutshixa aneshawa kunye nezindlu zangasese kumgangatho ophantsi
I-WiFi yasimahla, iTV enescreen esisicaba esinetshaneli zentambo
Ihlaziywe ngoJanuwari 2017
Izilwanyana zasekhaya zivumelekile - kufuneka sicetyiswe kuthi kwangethuba njengoko oko kuthetha ukucoca okungaphezulu kwamagama asemva kwamagama.
Ibonelela ngendawo yokuhlala ekumgangatho ophezulu wokuzityisa ebekwe kumbindi we-Åre. Sinikezela ngokufikelela kumnyango we-ski ukuya emnyango, amagumbi ethu abekwe kufutshane okanye kufuphi neBergbanan ski lift kunye ne-600 ukuya kwi-650 yeenyawo ukusuka kwi-ski lift ephambili i-Åre "Kabinbanan". Onke amagumbi abekwe kwisikwere esikhulu, iÅre Torg, eyona ndawo ithandwayo ziindwendwe e-Åre.
Igumbi lokuhlambela labucala, amagumbi okulala ama-2 okanye ama-3, isauna, isomisi, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, iTV, izihlalo zesofa ziimpawu kule ndawo yokuhlala. Ikhitshi enesitayile egcweleyo ibandakanya isitovu, i-oveni, isitya sokuhlamba izitya, imicrowave, ifriji kunye nesikhenkcezisi kunye netafile yokutyela. Igumbi lokuhlambela labucala lineshawari, indawo yokomisa iinwele kunye nesauna. Uya kufumana indawo yokugcina i-ski yabucala, ukuqasha izixhobo zokutyibiliza kufutshane kunye nokufikelela kumnyango we-ski ukuya emnyango.
Imisebenzi kwindawo ejikelezileyo ibandakanya ukutyibilika, ukukhwela ibhayisekile kunye nokuloba. Iindawo zokutyela ezininzi kunye neevenkile zifumaneka kufutshane nesikwere. Isikhululo sikaloliwe sikwi-850 iinyawo ukusuka kwipropathi, ngelixa iAre Ostersund Airport ikumgama oziikhilomitha ezingama-53.4.
Umbuki zindwendwe ngu- Åre Travel
UÅre Travel yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Åre SV